प्रिमियर लिग गोल्डेन बुटका ५ दावेदार | Hamro Khelkud
प्रिमियर लिग गोल्डेन बुटका ५ दावेदार
लन्डन (एजेन्सी)– म्यानचेस्टर युनाइटेडले लेसस्टर सिटिमाथि २–१ को कठिन जित दर्ता गरेसंगै यस सिजनको प्रिमियर लिगको सरुवात भएको छ । पछिल्लो बर्षको विजेता म्यानचेस्टर सिटी उपाधि रक्षाको दाउमा रहँदा यसअघिको सिजन गोल्डेन बुट जितेका मोहम्मद सलाहपनि सो उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा रहनेछन् ।
इंग्ल्याण्डका ह्यारी केनलाई पछि छाड्दै सलाहले पछिल्लो सिजनमा ३२ गोल गरेका थिए । व्यक्तिगत पाटोमा प्रिमियर लिगको गोल्डेन बुट जित्ने होडमा केहि नाम रहेका छन् । यस सिजनमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै गोल्डेन बुटको दाबेदार बन्न सक्ने ५ खेलाडीको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
५. रोमेलु लुकाकु (म्यानचेस्टर युनाइटेड)
एभर्टनबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडमा आएका बेल्जियमका स्ट्राइकर लुकाकुले अन्तिम सिजन सबै प्रतियोगितामा गरेर २७ गोल गरेका थिए । जसमध्ये १७ गोल भने प्रिमियर लिगमा गरेका थिए । अघिल्लो सिजन केहि आलोचनामा आएका लुकाकुलाई यस सिजन भने आफ्नो महत्व देखाउने मौका रहेको छ । बेल्जियमका स्टार लुकाकु बल हेड गर्न र क्रसको सदुपयोग गर्न माहिर छन् ।
४. सर्जियो अगुएरो (म्यानचेस्टर सिटी)
अर्जेन्टिनाको टोलीले विश्वकपमा अन्तिम १६ मा फ्रान्स विरुद्ध हार बेहोर्दा त्यस टोलीको सदस्य रहेका अगुएरो म्यानचेस्टर सिटिका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । खराब विश्वकप प्रदर्शनका कारण आलोचना खेपिरहेका अगुएरोलाई प्रिमियर लिगबाट प्रमाणित गर्ने मौका रहेको छ । यद्दपी सिटिको जर्सीमा उत्रिनसाथ अगुएरो फरक खेलाडी बन्छन् । प्लेमेकरको भूमिका र गोलकर्ताको भूमिकामा देखिन अगुएरोलाई रोक्न धेरै कठिन हुन्छ । विभिन्न तरिकाबाट गोल गर्न सक्ने अगुएरोको सबैभन्दा ठूलो क्षमतानै उनको फिनिसिङ शैली हो । उनको डिफेन्डरलाई छकाउने शैलीको सबैले तारिफ गर्छन् । प्रिमियर लिगको गोल्डेन बुटमा रेसमा त्यसैले पनि अगुएरो एक बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् ।
३. पिएरे इमेरिक औबामेयाङ (आर्सनल)
आर्सेनलको टोलीका नयाँ सदस्य पिएरेबाट यसपटक धेरैले ठूलो आशा राखेका छन्। आफ्नो अट्याकिङ पंक्ति सुधार गर्न आर्सेनलले पिएरेलाई ल्याएको थियो र पहिलो केहि खेलमा नै उनले आफ्नो भूमिका निभ्याउन भ्याए। आफ्ना साथी खेलाडीसंग मिलेर मुभ बनाउन चतुर पिएरे, आफैं गोल गर्न र अवसर सिर्जना गर्न समेत चलाख छन् । १३ खेलमा १० गोल गरेका पिएरेको खेल शैली प्रिमियर लिगसंग मिल्दो जुल्दो समेत रहेको छ । बोरुसिया डोर्टमण्डबाट आर्सेनल आएका पिएरे, मेसट ओजिल र हेन्रिख म्ख्त्रियनको साथमा आर्सनेलको अट्याक सम्हाल्न तयार छन् ।
२. मोहम्मद सलाह (लिभरपुल)
एएस रोमाबाट लिभरपुल आएका मोहम्मद सलाहले पछिल्लो सिजनको प्रिमियर लिगमा आफ्नो छाप छोड्न सफल भए । उनको गोल गर्ने तरिका उनले बनाएका अवसरको सबैले प्रशंसा गर्ने गर्छन। लिभरपुललाई च्याम्पियन्स लिगको फाइनलसम्म पुर्याउन समेत सलाहको ठूलो हात रहेको थियो । अट्याक बनाउँदा सलाहको गति, कला र ड्रीब्लिङ धेरै पटक विपक्षिलाई जवाफविहिन बनाउन पुग्छ। उनको खुट्टामा रहेको जादुरुपी मुभ सायद धेरै बिपक्षिले बुझ्न सक्दैनन् । अन्तिम सिजन ३२ गोल गर्दै इजिप्टका स्टार सलाहले गोल्डेन बुट आफ्नो नाम गरेका थिए। टोलीमा साकिरी र केइटाजस्ता खेलाडीको आगमनले सलाहको काम अझ सजिलो बनेको छ ।
१. ह्यारी केन (टोटेनह्याम)
प्रिमियर लिगकै उत्कृष्ट स्ट्राइकर मध्येका एक ह्यारी केनले अन्तिम केहि बर्ष यता प्राप्त गरेको लयलाई कायम राख्नेमा धेरै समर्थक विश्वस्त छन् । पुरानो शैलीका ९ नम्बर खेलाडी केनले बक्स भित्रबाट गोल गर्ने क्षमता राख्दछन् । केनसँग सलाहको जस्तो ड्रिब्लिङ क्षमता छैन र डिएगो कोस्टाको जस्तो अल राउण्ड प्रदर्शन गर्ने खुबी समेत छैन तर गोल गर्ने उनको क्षमतामा भने कसैले प्रश्न उठाउन उचित हुन्न। हावामा भएको बलमा केनले देखाउने नियन्त्रण उत्कृष्ट छ । एरिक्सन, अली र सन ह्युङ मिनको सहयोगमा केनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा दुई मत छैन ।